Article submitted by: minkyaw thuyein on 3-Apr-2013
မြန်မာ တို.နှင့် ၉၆ ပါးသောရောဂါ ။
လူလယ်လို အပြောခံရမှာ စိုးရိမ်သလား ၊ လူလိမ် လူကောက်လို.ပြောမှာကိုရော
ဘယ်လိုသဘောရသလဲ? ကိုယ့်ကိုကိုယ် လိမ်ညာသူ ဟာ သူတပါးအပေါ် လိမ်
ညာဘို. ၀န်မလေးဘူး ။ ကောဋဟဋတွေ သတိထားပါ လို. သတိပေးသူက ပေး
တယ် ။ ဒါကတော့ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ဆိုတာကို စဉ်းစားဝေဖန်နိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့
သိနိုင်တယ် ဒိတ္ထမျက်မြင် သက်သေ တယောက်လောက်ကို တန်ဘိုးရှိတယ် ။ တချက်စဉ်းးစာဘို.က. မီးစ မရှိလဲ မီးတောက် မရှိနိုင်ဘူး ဆိုလားဘဲ ။
လယ်ရမယ် ဂျင်လို လယ်ရမယ် လူဟာ လယ်လယ် ၀ယ်ဝယ် ရှိရမယ် လူလယ်
ဖြစ်ရမယ်လူလိမ်လူကောက် တော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကိုယ်က တကယ်လယ်ရင် ကိုယ်အပေါ် ဘာအညစ်အကြေးမှ မကပ်နိုင်ဘူး ၊ ကိုယ် တကယ်လယ်ရင် ကိုယ့်အပေါ်ဘယ်သူမှ လူလယ် မကျနိုင်ဘူး ။ ကိုယ်လယ်တိုင်းလည်း သူများ
အပေါ် လူလယ်ကျစရာမလိုဘူး ။ လယ်လယ်ဝယ်ဝယ် ဆိုတဲ့ စကားက ကြား
ကောင်းတယ် ၊ လူလယ် လို. ဆို လိုက်ရင်တော့ တမျိုးကြီးဘဲ ။ မြန်မာတွေ အပေါ် လူလယ်ကျနေတယ်ဆိုတာကနေ ဗိုလ်ကျနေတယ် ဆိုတာထိဖြစ်ရ
အောင် ဒီ ဗိုလ်က ဘာဗိုလ်လဲ ၊ ဗိုလ်လား ဘို လား? ဘယ်က ဘို တွေလဲ - ဘာဘိုတွေလဲ ? ဗိုလ်မှန်ရင်ဖြစ်စေ ဘိုမှန်ရင် ဖြစ်စေ ဗိုလ်ကျရမယ် ဆိုတဲ့ ဓလေ.ထုံးစံ လား ဗိုလ်ကျနိုင်ခွင်.ရှိတယ် ဆိုတာလား? အချို.ကလဲ ဗမာ ကျတယ် လို.ပြောကြတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားမှာ “ Rolling stone gathers no moths” လို.ဆိုတယ်၊ တိုက်ရိုက် ပြန်ဆိုမလား၊ အဓိပါယ်ကို ဖေါ်ပြမလား? မြန်မာ မှာတော့ “ လည်လွန်းတဲ့ ဘီး ချီးသင့် ” လို. ဆိုတာကို တွေ.ရတယ်၊ ကြားဘူးကြမှာပေါ့၊ သူတိုဟာဆန်.ကျင်ဖက်လား၊ သူတို.လဲသူတို.နေရာနဲ့ သူတို.၊ သူတို.အဓိပါယ်
်နဲ့ သူတို.ဘဲ ပေါ့ ၊ ဒို က မြန်မာတွေ ဆိုတော့ ဒို.အဓိပါယ်နဲ့ ဒို.ဘဲလိုဆိုမလား?
လွှတ်တော်ထဲမှာ စစ်သားတွေရှိနေတာ တချို.လူတွေသိပ်မကြိ်ုက်ဘူး ၊ ဘာကြောင့်မကြိုက်သလဲ ဆိုတာတော့ အကြောင်း အကျိုးနဲ့ရှင်းဘို.လိုလိမ့် မယ်။ ရှင်းချက်ရှိရင်လဲ တင်ပြလေ၊ စဉ်းစားကြတာပေါ့၊ ဟုတ် ဘူးလား။ ရှိတော့ရော ဘာဖြစ်သလဲ ၊ “ တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူ ကြည်ဖြူရေး -လက်တွဲ
ဆောင်ရွက်ရေး - ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး - ညီညွတ်ရေး ” စသည် စသည်ဖြင့် အကောင်းအမြင်နဲ့ကြည့် လို.ရပါတယ် ။ ထုံးစံမှ မဟုတ်ဘဲဆိုတာတော့ မပြော
ပါနဲ့. ။ ထုံးစံမဟုတ်တာတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများကြီးရှိ ပါတယ် ၊ ပြောရရင် စွယ်စုံကျမ်း ဘယ်နှတွဲလောက် ထွက်မယ်တောင် မသိဘူး။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ
က အစ ၀တ်စား ဆင်ရင်မှုထိ အဆုံး ထုံးစံ မဟုတ်တာတွေကတော့ ပြောမနေ
ဒီလိုသာပြောရတယ် ၀ါးလုံးသိမ်းရမ်းသလိုဘဲ ဖြစ်နေပြီ ၊ကျေးလက်တောရွာက လူတွေ တနည်းအားဖြင့် တောသားတွေ လို.ဘဲ ခေါ်မလား ၊ခေတ်ပညာမတတ်
တဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက်တွေလို.ဘဲ ဆိုမလား. ဒီလို ခွဲခြားမှူတွေဟာ ဘယ်
တုန်းက ပေါ်လာတာလဲ? ဘယ်သူတွေက ခွဲခြားတာလဲ ?
တောင်သူလယ်သမားတွေ ကြားမှာ မြန်မာမှုတွေ ထုံးစံတွေ မပျောက်သေးဘူး ဆိုတာတော့တွေ.ရတယ် ။ မြို.သားတောသားဆိုတာက တော. အခုမှ ကွဲ့ပြား ခွဲခြားနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ မြို.သားတွေ လူလယ်ကျသမျှ တောသား
တွေ ခံခဲ့ရတာ သမိုင်းစဉ် တလျှောက်ပါဘဲ ၊ တကယ်တော့တောသားတွေဆိုတဲ့
တောင်သူလယ်သမားတွေ စိုက်တဲ့ ဆံ ကို ဒို.အားလုံး စားနေ ကြတာဘဲ မဟုတ်
လား၊ မြို.သားတချို.ကတော့ သူတို.ဟာ ခေတ်မီသူတွေအဖြစ်နဲ့ နိုင်ငံခြားက တင်သွင်းတဲ့ ယိုးဒယား ဆံ။ ဂျပန် ဆံ ၊ အိန္ဒိယ ဘတ်(စ)မာတီ၊ အမေရိကန် လောင်းဂရိန်း ဆံစားတာလို.ပြောခြင်ပြောလိမ့်မယ် ၊ ဒါကြောင့်လည်းသူတို. မြို.သားတွေ လူလယ်ကျနေတာ လူပါးဝနေတာဖြစ်နိုင်တယ် ၊ ဒီလိုလူတန်းစား၂ ရပ် ရှိနေတာကိုအခြေခံပြီး အရာရာမှာ ပဋိပက္ခရောဂါ ဆိုတာကို ဖန်တည်းနေ တာသာ ဖြစ်တယ်။
၁၉၁၇ ခုနှစ် ဘော်ရှိဗစ် တော်လှန်ရေး အပြီးမှာ လူတန်းစားညှိဘိုအသက်ပေါင်း
များစွာပေးကြိုးစားခဲ့တာ အကြောင်းမျိးုမျိုးကြောင့် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်ခဲ့ ရုံဒင်မက လူတန်.စား ပဋိပက္ခဟာ ကြီးထွားပြီး တိုးသထက်
တိုးလာလာခဲ့တယ် ။ ဒီမတိုင်ခင်ကလဲ စာဖတ်သူတိုင်း သိထားပြီး ဖြစ်တဲ့ ၁၈၆၁ -၁၈၆၅ ကာလ သမတအေဘရာဟင် လင်ကွန်း လက်ထက်မှာ ကျေး
ကျွန် စံနစ်ဆိုတာကို ဖျက်သိမ်းခဲ့တယ် ဆိုရပေမဲ့ အကယ်တော့ ကျေးကျွန်စံနစ် ဆိုတဲ့ စကားရပ်နဲ့ အေဘရာဟင် လင်ကွန်းတို.သာ ပျောက်သွားခဲ့ ပြီးကျေးကျွှန်
တန်းစားဟာ နည်းအဖုံဖုံ နဲ. ရှိနေဆဲ လို.ြေ့ပာနိုင်တယ် ၊ လူမျိုး ဘာသာ အသား
အယောင် အဖြူအမဲ ခွဲခြမ်းခြင်း ဆိုတာတွေကလဲ ရှိသေးတယ် ၊ ဖွံဖြိုးတိုးတက်
သောဟာ နိုင်ငံ၊ ဖွံ.ဖြိုးမှုနဲသော နိုင်ငံ ဆိုတာတွေ ဟာ လူ တွေ ရဲ့ ဖန်တည်းမှူ
ဘဲ ၊ လူလူချင်း မတူဘူးလို.ပြောရမလား၊ လူသာလျှင် ပထာဏ ဆိုတော့လဲ ကြိုကကြပုံမရှီဘူး ၊ စံနစ်ကွဲပြားခြားနားနေ တာကို ပျောက်ကွယ်သွားအောင်
မလုပ်နိုင်သလို. လူတန်စား ခွဲခြားမှူကို ဘယ်လိုမှ ပပျောက်သွားအောင် မလုပ်
နိုင်ဘူးဆိုတာကို လက်တွေ.မှာ တွေ.နေရတယ် ၊၊
သူများနိုင်ငံတွေ မပြောနဲ့ မြန်မာလိုနိုင်ငံမျုိုးမှာ အထင်ရှားဆုံးတွေ.နေရတယ် ။ အခိုင်းအစေ ဆိုတဲ့ လူတန်း စားတရပ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထင်အရှားရှိနေတယ်၊
“အိမ်စေ”ဆိုတဲ့စကားလုံးအပြည့်အစုံကတော့”အစေခံ” ဆိုတာဘဲ၊ ဘယ်အလုပ်
သမားဥပဒေနဲ.မှ အကျုံးမ၀င် ၊ မကာမိ တဲ့ လူဌားစားမှု လူရောင်းစားမှု လူကုန်
ကူး မှုဆိုတဲ့ ဒေသဆိုင်ရာကျွန်စံနစ်တခုထက် ဘာမှ မခြားဘူး။ အလုပ်သမား
နှင့် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေးလုပ် ငန်းတွေဟာလဲ ဥပဒေတွင်း က လူ ကုန်ကူး
နေမှုတွေ လူလူချင်း သိသိသာသာ ခေါင်းပုံ ဖြတ်နေတာဘဲ လို. မြင် တယ်။
ဗုဓ္ဒကိုယ်တိုင် ဟောထားတာက မမြဲခြင်း ၊ အရာရာသည် မမြဲ ဘူးဆိုတာဘဲ ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဟာ မမြဲခြင်းဆိုတာ ကိုထင်ရှားစေတယ် ၊ မမြဲတာကို မြဲအောင် လုပ်မနေနဲ့ ဒုက္ခတွေ ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ် ။ ကာလံဒေသံ အင်္ဂမ်ဒနမ် လို. ဆိုထားတာလဲ ရှိသေးတော့ ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို အလျှင်းသင့်သလို စည်းစံနစ်နဲ့လုပ်ပေးရမယ် ၊ သူ.ဟာသူ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လာတာကို စောင့်နေ
ရင် ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ဟာ ဒီရေလှိုင်းလို ရုတ်တရက်နဲ့ တကယ်ရောက် လာရင် ကိုယ်က အသင့်မဖြစ်သေးရင် မနိုင်မနင်းတွေ ဖြစ် ကုန်နိုင်တယ် ။
ဥပမာ မြစ်ချောင်း ကမ်းပါးတွေ ဒိုက်တွေ တာတွေ ကို ပြုပြင်ခြင်းမရှိရင် ၊ လယ်တွေ ကဇင်းတွေ ပြုပြင်ခြင်း မရှိရင် လေကြီး မိုးကြီး ရေကြီးပြီး စူနာမီ တဲ့အခါ ၊သောက်သောက်လဲ သေကြေ ပျက်ဆီးခြင်းနဲ့ မလွဲ မသွေ ကြုံတွေ.ကြရ တယ် ဆိုတဲ့ သဘောဘဲ ။
ကြည့်ကြစမ်းရအောင် ၊ မြင်တာ တွေ.တာတွေ တချို.ကိုပြောမယ်နော် ၊ မြန်မာ.
လေကြောင်း ပြောင်းစီးကတည်း သတိ ထားမိတာကတော့။ မြန်မာဖြစ်ရတာ တန်ဘိုး မရှိပါလား ဆိုတာဘဲ ။ ဒါကြောင့်လဲ မြန်မာတွေကြားမှာ ‘ အဖြူ မြင်မှ လူထင်တယ် ‘ ဆိုတဲ့ စကားရပ်ပေါ်လာတာဘဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် ၊ လူတွေဟာ လူမျိုးဘာသာမရွေး အခွင့်အရေးတန်းတူ ရှိကြတယ် ဆိုတာကို သိထားသူ တယောက်အနေနဲ့ဘယ်အခွင့်အရေးကိုမှ ဘယ်အကြောင်းကြောင်းနဲ.မှ ပိုပြီး
မျှော်လင့် ဘူး၊ မျက်နှာထိ မျက်နှာထားနဲ့ လူကိုကြည်တာပြောဆိုတဲ့လေယူ
လေသိမ်း ကိုယ်ဟန်အမူအယာ တို.က ကိုယ့် ကို ခွဲခြား ဆက်ဆံနေမှန်းသိရ
တယ် သိသာတယ် ၊ ကိုယ်လူမျိုးက ကိုယ်လူမျိုးကို ခွဲခြား ဆက်ဆံခံရတာ ဟာ အထင်မဟုတ်ဘူးနော် ။ လက်တွေ.တွေ ၊ လူမျိုးခြားကို ရိုင်းရိူင်းဆိုင်းဆိုင်း
ဆက်ဆံ ရမယ်လို.လဲ မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယ်လူမျိုးတော့ ကိုယ် သိဘို.ကောင်းပါသေးတယ် လို.သာ ဆိုခြင်တာပါ။
မုန်ဟင်းခါးဆိုင် ၊ ခေါက်ဆွဲဆိုင် လဘက်ရေဆိုင်ကအစ ဂါးဒင်းရက်စတောရင့်
စားသောက်ဆိုင် အမျိုးမျိုးမှာ ဧည့်ကြို စားပွဲထိုး လုပ်နေကြတဲ့ လူငယ်အလုပ်
သမားတွေကို စားသုံးသူ ဖေါက်သယ် မြန်မာဆိုတာတွေက ဘယ်လောက် လူ မဆန်စွာ ဆက်ဆံ ကြတယ် ဆိုတာလဲ ကြုံးဘူးမှ သိကြလိမ့်မယ်။ သူတို.အိမ်က အိမ်ဖေါ် ( အစေခံ) ၊ ကားမောင်း ခြံစောင့် ဥယဉ်အလုပ်သမားတို.ကို ဘယ်လို
ဆက်ဆံကြတယ် ဆိုတာလဲ ကိုယ်တိုင် မြင်ဘူး တွေဘူးမှ သိကြလိမ့်မယ်၊ နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ ဧည်သယ် ကို ကြွားခြင် လို. ရှိုးပြခြင်လို.ဆိုရင်လဲ ။ အကြွား
သီးခံပါခင်ဗျာ ၊အားမနာတန်း ပြောရရင်တော့ အိမ်ဖေါ် (အစေခံ)အများစုဟာ တောင်ပေါ်သား လူမျိုးစုဝင်တွေ၊ မိန်းခလေးတွေသာ ဖြစ်ကြတာကိုလဲတွေ.ရလေတော့၊ သူတို.ကို အိမ်ရှင်တွေက ဘယ်လိုများဆက်ဆံကြလိမ်မ့ယ် ဆိုတာ မတွေးဝန့်ဘူး၊သူများနိုင်ငံတွေကအကြောင်းတွေတော့ နားမဆန်.အောင် ကြား
နေရတာတွေ ရှိတယ် ။ ကေါလဟဠ ဟုတ်မဟုတ် တော့ မသိဘူး။
“ ဒီဟာတွေ ကို ကျုပ်တို.က ကျွေးမထား မွေးမထားရင် ဒီဟာတွေ ငတ်ပြတ်
ကုန်မှာပေါ့ သူတိုမနေခြင်ရင် အချိန်မရွေး ထွက်သွားနိုင်တာဘဲ” လို.လွယ်လွယ်
နဲ့မိုက်မိုက် မဲမဲပြောတတ်သူကလဲ မရှားဘူး ။ ဒို.နိုင်ငံ နဲ့ ဒို.လူမျိုးတွေကြားမှာ အမျိုးသား ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး၊ ညီညွတ်ရေး၊ သဟဇါတဖြစ်ရေးကို ဘယ်လို ပံ့ပိုးမှူတွေ ဖြစ်လာစေမယ် ဆိုတာတော့ မခန်.မှန်းနိုင်အောင်ဘဲ။
ရန်ကုန်လေဆိပ်ထဲ ရောက်တော့လဲ ပတ်စပို.ကွန်ထရိုးနဲ.ကတ်စတန်တို.က စစ်လိုက် ဆေးလိုက် မေးလိုက်မြန်းလိုက်တာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်ကို ရာဇ၀တ်
ကောင် ၀ရန်းပြေးလား တရားခံပြေး စာရင်းဝင်နေသလားလို.တောင် သင်္ကာ မကင်းဖြစ်မိတယ် ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် မသတီ တော့ဘူးဆိုရင် မှန်မလား ဘဲ ၊ ဟိုဘက် တိုးရစ်(စ) ကောင်တာမှာ တော့ မြန်မာအရာရှိတွေ အမှုထမ်း
တွေဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ. ပြုံးပြီး ပလူးနေတယ် လို.ပြောရမလားဘဲ၊ ဒါတွေဟာ အစိုးရ အမိန်.အရလား၊ ဌာန ဆိုင်ရာ ညျွန်ကြားချက်အရလား? အဲဒါကြောင့် ဟိုတလောက “ နောင်ဘ၀ ခွေးဖြစ်ရင် တောင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သွားမဖြစ်ပါရစေနဲ့” လို.ဆုတောင်းမိတာဖြစ်တယ်။ မပြောနိုင်ဘူးလေ ဂေါတမဗုဒ္ဒ နုစဉ် တချိန်က ခွေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကို ၅၅၀ ဇါတ်တော်ထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရဘူးတယ်။
မြန်မာတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ပြောစရာတွေကတော့ အများကြီးဘဲ ဘယ်က စ ပြောရမယ်တောင် မသိဘူး။ ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက် ဆိုတာထင်ပါရဲ့တီးတိုးမမှန်
သတင်းလွှင့်ရမလား၊ ပြောရမလား သျှာသွက်တယ်၊ နောက်ကျောကို ဒါးနဲ့ ထိုးရ
မယ် ဆိုရင် တော့ လက်သွက်တယ် ။ အဲဒါ မြန်မာ တဲ့ လေ၊ မယုံမရှိနဲ့နော်၊ ၀က်(ပ)ဆိုက် တွေပေါ်မှာကိုတွေ. နေရတယ်၊ တချို.တွေများဆိုရင် ဆွေးနွေးကြရ
အောင်ဆိုတော့လဲ မဆွေးနွေးဘူး။ ဘာမှ အကြံပြုခြင်း တင်ပြဆွေးနွေး ခြင်း ၊ အမြင် ဖလှယ်ခြင်းတွေ မရှိ ဘဲ ၊ အချောက်တိုက် ဗလာချီဆဲရေးတိုင်းထွာနေကြ
သူတွေဆိုတာတွေ.ရတယ်၊ လူ.အခွင့်အရေး အရ ဆိုတာဘဲ ထင်ပါရဲ့။ သူတို.အနေနဲ့ ဒီလိုဘဲ နားလည်ကြတာကိုး ။ သင်သူတွေ ညံ့လို.လား သူတိုကိုယ်တိုင်
က နာယူနိုင်မှုစွမ်းအား မရှိလို.၊ အားနဲလို.ဘဲလား၊
ဂေါတမ ဗုဓ္ဒ ဟောတဲ့တရားတွေ သင်္သကရိုက်ဘာသာမှ ပါဋိ သို. ၄င်းမှ မြန်မာ
ပြန် လို.အကြမ်းအားဖြင့်သိရတယ် ။ ဘာသာပြန်တယ်ဆိုတာ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆို
ြိုခင်း၊ အနက်သဘော အဓိပါယ်ကို ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ သဘောပေါက် နားလည် သူတွေ
နားလည်တယ် ၊နားမလယ်သူတွေရှိတယ်၊ (ကိုယ်လဲ ဒီအထဲ ပါခြင်ပါမယ်) မကြားဘူးသူတွေတောင်ရှိမယ်။ ဒီထဲမှာ အနှစ်သာရ ဆိုလိုရင်း အနက်အဓိပါယ်
ကို နားလည်သဘောပေါက် မြီးစမ်းမိရင်ဘဲ ၉၆ ပါးသော ရောဂါပျောက်နိုင်တယ်